Home Wararka Doorashada Koonfur Galbeed oo markii afaraad dib loo dhigayo
Doorashada Koonfur Galbeed oo markii afaraad dib loo dhigayo
Waxaa lagu wadaa in markii afaraad in dib lo dhigo doorashada Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed. Waxa wali isafgarad la’aan ka jirtaa qaabka doorashada u dhaceeyso iyo cida hogaaminayso.
Dowlada Fedaraalka ayaa wali waxa ay wadaa faragalin la xiriirta qaabka loo abaabulayo doorashada. Gudoomiyaha Gudiga Doorashada ayaa u sheegay qaar ka mida xubnaha Barlamaanka ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed in ay u adkaan doonto in doorasho dhacdo bisha Janaayo 19keeda.
Wararka qaar ayaa sheegayo in doorashada dib loo dhigo mudo sadax biloood ah isla markaana la magacaabo dowlad ku meel-gaar ah. Si kastaaba ha ahaatee waxaan shaki ku jirin in dadka ku dhaqan deegaanka Koonfur Galbeed ay caqabado hor leh ku soo wajahan tahay taas oo keeni karta in colaad hor nleh dib uga bilaabato deegaankaas.
Previous articleR/wasaare Kheeyre oo safar dibada ah u baxaayo!!
Next articleSomaliyey Maanta Shalay u ekaa?!!!! Bal u fiirsada!
Boobka Doorashada: Mudo saacad ka yar ayaa lix xildhibaan saakay lagu soo xulay
Abiy Axmad oo si diiran loogu soo dhaweeyay magalaada Jig-Jiga
(Daawo) Taliyaha CBS “Rooble wuxuu boobayaa dhulkii Ciidamada Badda”
Gudoomiyaha rugta ganacsiga jubaland oo ladoortay